साहस उर्जा कम्पनीको आइपिओ आउँदै, हेरौं कहिले आउँदैछ? कस्तो छ कम्पनी? – Eps Sathi
September 16, 2021 676
साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्काशन गर्ने भएको छ। यस कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो। यस अनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ७० लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्नेछ।
आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपि आईआर डबल बी प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ।
Prevगत ४ बर्षमा सउलका अपार्टमेण्टको मूल्य भयो दोब्बर, अधिकाँस अपार्टको मूल्य १ अर्व माथि
Nextब्वाएफ्रेनले बर्थडे बिर्सिने र आउन सकिन भन्ने अनि सरि भन् भन्दा सरि नभनेको कारण २० बर्षे यु’व,तीद्वारा म’र्ने प्रयास
बनपाले पोष्टमा जागिर खान दौडिदा ६४ बर्षिय पुरुषको मृत्यु